I-Bizzabo: Amandla oMntu waKho kunye neziGaneko eziBonakalayo kwiQonga elinye | Martech Zone
I-Bizzabo: Amandla oMntu waKho kunye neziNto eziSebenzayo kwiQonga elinye
NgoLwesihlanu, Oktobha 2, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 2, 2020 Douglas Karr
I-Bizzabo liqonga lempumelelo lomnyhadala obonelela iqela lakho ngazo zonke izixhobo abazifunayo ukwenza iminyhadala enomvuzo ngelixa befumana ulwazi lokunceda iminyhadala yakho ikhule ngeendlela ongazange ucinge ukuba zinokwenzeka.
Iimpawu zeQonga leBizzabo
Zonke-in-nye zikaBizzabo Isoftware yomsitho yenza ukuba umntu kunye neziganeko ezibonakalayo zikwazi ukuhambisa amava awodwa abakhoyo ngokuzibandakanya okwenziwe ngumntu okrelekrele kunye nenjongo.
Ubhaliso lweMisitho -Ukucwangcisa ngokupheleleyo undwendwe lwakho ukuze uye kumava akho kunye neefom ezicebileyo nezothusayo, iintlobo zeetikiti ezininzi.
KwiSayithi leNkundla -Yakha iwebhusayithi yomsitho onophawu kunye nomhleli onamandla odityaniswe ngokupheleleyo nesoftware yakho yobhaliso lomsitho kunye neapp yomsitho.
Ukuthetha Thumela iimemo ze-imeyile kunye namaphulo okwazisa aqhuba inzala kunye nobhaliso ngoncedo lomxholo owenzelwe wena.
bandakanya - izaziso zokutyhala, uthungelwano lomntu ngamnye, i-ajenda yokunxibelelana, kunye nokuvota ngokusebenzayo konke kusebenza kunye ukugcina abo bazimeleyo bezibandakanya-ngaphakathi nangaphandle kwenkqubo yomsitho weselfowuni.
Yenza imali -Nika abaxhasi bakho amathuba awodwa, kubandakanya izikrini zesiko, izibonelelo ezizodwa, izaziso ezizenzekelayo zokukhwaza, ii-tiers zenkxaso, kunye nedatha yokulinganisa ngokuchanekileyo i-ROI exhasa
ingxelo -Ukuxela okunzulu kwenza ukuba kube lula kwiqela lakho ukuba liqonde indlela ezenzeka ngayo iziganeko ngokuthelekiswa neebenchmarks. Cwangcisa iinjongo, umkhondo wengeniso kunye nokuzibandakanya, kunye nokunye.
I-Bizzabo inceda iinkampani ukulinganisa, ukulawula, kunye nokulinganisa iminyhadala kwiziphumo eziphambili zeshishini-ukuxhobisa wonke umququzeleli, umthengisi, umbonisi, kunye nabazimeleyo ukuze basebenzise amandla emisitho yobungcali.
Iziganeko eziqinisekileyo zeBizzabo
I-Bizzabo inceda iinkampani ukuba zifikelele kubuchule bokuzibandakanya kwabaphulaphuli ngamava (phantse) ezinempembelelo njengeziganeko zomntu, naphi na apho bakhoyo. Ngesisombululo sabo sokuphela, uyakwazi ukuhambisa usasazo oluphezulu kunye neevidiyo ezifunwayo kwisikali nesisombululo sebanga. Iimpawu zibandakanya:
Ukusasaza bukhoma iminyhadala yonke okanye iiseshoni ezithile kubaphulaphuli behlabathi balo nabuphi na ubungakanani ngeqonga levidiyo elikhokelayo, enikwa amandla Kaltura.
Yakhelwe ngamanqanaba aphezulu okhuseleko kunye nemigangatho yabucala yokuqinisekisa ukuba idatha yakho ikhuselekile kwaye iyayithobela imigaqo.
Yandisa ingeniso yenkxaso mali kunye nentengiso yevidiyo kwintengiso ngokubekwa kumnyhadala wakho.
Yandisa isisombululo sikaBizzabo kwaye uqhagamshele kwitekhnoloji yevidiyo oyithandayo.
I-Bizzabo ikwabonelela ngeeNkonzo zeMveliso eziSebenzayo
Iqela leNkonzo yeeMveliso eziBonakalayo zeBizzabo libonelela ngeenkonzo zokugqibela kunye nezokungqanyaniswa kubandakanya imveliso epheleleyo, iaudiyo kunye nokubonwayo, uyilo, ukumiliselwa, nokunye okuninzi.
Ukusuka ekulungiseleleni izithethi kunye neemodareyitha kusasazo oluveliswe kakhulu, iBizzabo ibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ukulungiselela iimfuno zakho zomnyhadala.
I-Bizzabo igunyazisa imisitho yeemveliso ezinje ngeForbes, HubspotINBOUND, Dow Jones, Gainight, kunye nezinye ezininzi. Inkampani yasekwa nguBoaz Katz, Alon Alroy, kunye no-Eran Ben-Shushan, kwaye inabasebenzi abangaphezulu kwe-100 kwiiofisi zaseNew York naseTel-Aviv.
tags: bizzabousetyenziso lwenkomfainkomfa yentengisoinethiwekhi yokuncokola
I-Kameleoon: Injini ye-AI yokuQikelela ukuGuquka kwabaTyeleli
Uluhlu lweWebhusayithi Uluhlu lokuKhangela: I-67 yoQeqesho oluGqwesileyo kwindawo yakho